Imisebenzi yezandla engu-15 ye-Halloween ukuze ibe nesikhathi esesabekayo | Imisebenzi yezandla ivuliwe
15 Crafts Halloween ukuba nesikhathi esihle
Isabel Catalan | 14/10/2021 18:00 | Ubuciko be-Halloween, Imisebenzi yezandla yezingane
I-Halloween iyeza futhi sekuyisikhathi sokulungela ukugubha ngesitayela! Kuthiwani ngokuthatha ithuba lokwenza okuthile Ubuciko be-Halloween amantombazane amakhulu wokuhlobisa indlu futhi abe nesikhathi esimnandi? Kulokhu okuthunyelwe sibuyekeza eminye yemisebenzi yobuciko yangempela ukwenza lamaholide. Ungaphuthelwa!
1 Bat clip nezinye izinketho zokugubha i-Halloween kulo nyaka
2 Witch squashed on the doormat - ubuciko obulula be-Halloween
3 Umshanelo womthakathi
4 Ikati elimnyama elinamakhadibhodi
5 Ukusonga ushokoledi nge-Halloween
6 Umama wamakhadibhodi amnyama we-Halloween
7 I-Halloween garland yokwenza nezingane
8 Monster pack ukunikeza uswidi on Halloween
9 Umama olula we-Halloween wokwenza nezingane
10 Umnikazi wamakhandlela we-Halloween osesimweni somama
11 Izintandokazi ezihle ze-lolly ze-Halloween
13 I-bat enhle yamakhadibhodi
14 Ikati le-halloween
15 Isigqoko esincane se-Halloween
Bat clip nezinye izinketho zokugubha i-Halloween kulo nyaka
Siqala ngalokhu ilulwane yelulwane, omunye wemisebenzi elula kakhulu ye-Halloween ongayilungisa ngokushesha ngezinto ezithile osuvele unazo ekhaya njengezikhonkwane zezingubo zokhuni, omaka abamnyama, amakhadibhodi amnyama, isikele, amehlo ezobuciko kanye nesibhamu se-silicone.
Ungasebenzisa lesi siqeshana se-bat ngokwesibonelo ukulengiswa ngamakhethini endlu, ukulengisa izingubo ocingweni lwezingubo noma ukuhlobisa izincwadi zokubhalela, phakathi kokunye ukusetshenziswa okuningi. Eposini Bat clip nezinye izinketho zokugubha i-Halloween kulo nyaka uzobona imiyalo yokwenza.
Witch squashed on the doormat - ubuciko obulula be-Halloween
Le emayelana nabathakathi ingenye yezingqikithi ezixhunyaniswe kakhulu nephathi le-Halloween. Kungakho ingeke ilahleke kulolu hlu. Ngiletha omunye wemisebenzi yobuciko ehlekisa kakhulu ye-Halloween ongayilungiselela le sizini futhi ongamangaza ngayo izivakashi zakho uma ugubha iphathi ekhaya. Ngisho lokhu okuhlekisayo isicabha esenziwe ngomlingo esichotshoziwe, omunye wemisebenzi yezandla elula ukuyenza ekhaya.
Uzodinga kuphela izicathulo namasokisi, ukugxisha isiguqo kanye ne-doormat. Ukubona ukuthi kwenziwa kanjani ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Umthakathi uchotshoziwe emnyango lapho uzothola khona igxathu negxathu.
Omunye umhlobiso ongeke ulahleke ekhaya ukugubha lolu suku olubalulekile umshanelo womthakathi. Uma ufuna ukunikeza ukuthinta okwehlukile ekuhlobiseni kwendlu, ngiphakamisa ukuthi uphinde ukwenze lokhu Umshanelo womthakathi lapho ungeke udinge izinto eziningi. Eqinisweni, konke okumele ukwenze ukubamba amagatsha ambalwa kanye nebhande elithile ukuze uzibophele ndawonye. Kulula kanjalo!
Kodwa-ke, uma ufuna ukubona ukuthi kwenziwa kanjani ngokuningiliziwe, ngikweluleka ukuthi ufunde okuthunyelwe Umshanelo Witch ukuhlobisa nge-Halloween.
Ikati elimnyama elinamakhadibhodi
Isilwane esithandwa kakhulu ngabathakathi asinakungekho kulolu hlu lwezandla ze-Halloween. Kuyinto yakudala futhi izingane zizokuthanda ukubamba iqhaza ekuhlobiseni indlu ngokwenza lokhu kube kuhle ikati elimnyama abangazibeka emakamelweni abo. Kwenziwa nge-jiffy futhi kulula kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ivezwe kahle eceleni komshanelo engikukhombisa wona kubuciko bangaphambilini.
Njengezinto zokwakha kuzodingeka uthathe amakhadibhodi amnyama nomunye umbala owuthandayo, ubuciko bamehlo, iglu nesikele. Uyabona ukuthi yenziwa kanjani kokuthunyelwe Ikati elimnyama elinamakhadibhodi. Uzoyithanda!
Ukusonga ushokoledi nge-Halloween
Izingane zithanda uswidi noshokoledi. I-Halloween yisikhathi esihle kakhulu sokuvumela umcabango wakho ugijime futhi ulungiselele amaswidi anezimo ngokuya ngengqikithi. Isibonelo this vampire bheka evala ukwethula ushokoledi. Uyomangala kokubili izingane kanye nabantu abadala!
Lokhu kungenye yezandla ze-Halloween ongeke uzidinge izinto eziningi. Ikhadibhodi elimnyama nelomaroni, amehlo ezobuciko, induku yeglue, ibha yoshokoledi kanye nesikele kuzokwanela. Kulula kanjalo! Uma ufuna ukubona ukuthi kwenziwa kanjani igxathu negxathu ungaphuthelwa okuthunyelwe Ukusonga ushokoledi nge-Halloween.
Omunye umlingiswa ojwayelekile wendawo yonke ye-Halloween izidumbu. Uma ulungiselela ubuciko obuningi be-Halloween kulo nyaka, lena ngeke ilahleke ohlwini lwakho! Kuyindlela ye- amakhadibhodi amnyama mummy Kulula ukukwenza futhi ukukwenza ngeke udinge izinto zokwakha eziningi, nje amakhadibhodi amnyama amancane, ipensela, irabha, uboya obumhlophe, amehlo ezobuciko, i-glue, isikele neteyipu.
Uma ufuna ukwazi ngokuningiliziwe imiyalo yalo msebenzi, ngincoma ukuthi ufunde okuthunyelwe Umama wamakhadibhodi amnyama we-Halloween.
Uma ufuna ubuciko be-Halloween ngoba uhlela ukwenza iphathi, le garland izokusiza ukuhlobisa igumbi ozoyigubha kulo. Kulula kakhulu ukukwenza futhi kuhle ukuthi izingane zibambe iqhaza futhi zihlanganyele nemihlobiso yephathi.
Izinto ozozidinga ukulungiselela lokhu umqhele ohlekisayo Ngamaphepha okwakhiwa amnyama nawolintshi, itheyiphu, amapensela, isikele, irabha, nentambo emhlophe ethile. Uma ufuna ukubona ukuthi kwenziwa kanjani, unganqikazi ukuchofoza kokuthunyelwe I-Halloween garland yokwenza nezingane futhi lapho uzothola imininingwane igxathu negxathu.
Enye indlela yokumangaza abancane ngesikhathi sephathi se-Halloween ukwenza nokusabalalisa leli phakethe elihle elimise okwe-monster eliqukethe amaswidi. Bazoyithanda! Bona ngokwabo bangabamba iqhaza ekulungiseleleni kwabo futhi bakulethe kwezinye izivakashi ngesikhathi sephathi.
Ukuze wenze lokhu iphakethe le-monster candy Uzodinga kuphela izinto ezimbalwa: amakhadibhodi asephepheni lasendlini yangasese, amehlo ezandla, iphepha lokwakha elinemibala, isikele, nesibhamu esishisayo seglue. Thola ukuthi kwenziwa kanjani kokuthunyelwe Monster pack ukunikeza uswidi on Halloween.
Umama olula we-Halloween wokwenza nezingane
Lo mama ungomunye wemisebenzi yezandla yaseHalloween elula kangangoba nezingane zingazenzela zodwa. Bazosebenzisa isikhathi sokujabulisa kakhulu ukwenza lokhu Umama ukuhlobisa igumbi lakho noma yiliphi elinye ikhona lendlu.
Ukwenza lo msebenzi ungasebenzisa ezinye zezinto osuvele unazo ekhaya kusuka kweminye imisebenzi yobuciko yangaphambilini, njengamabhokisi ephepha lasendlini yangasese, amehlo agudlukayo, umqulu wentambo emhlophe, isikele, ipensela netheyipu. Ukubona ukuthi kwenziwa kanjani, ungaphuthelwa okuthunyelwe Umama olula we-Halloween wokwenza nezingane.
Ukuhlobisa amakamelo endlu nokuyithinta njengesipoki, ucabangani ngokwenza lokhu ophethe ikhandlela elipholile kangaka esimweni somama?
Ingenye yezakhiwo ezinhle kakhulu futhi ezilula ze-Halloween okufanele uzilungiselele. Njengezinto zalokhu ikhandlela Kuzofanele uthole imbiza yengilazi, amabhandeshi, amanye amakhandlela, amehlo ezobuciko kanye nesibhamu esishisayo seglue. Kulula kanjalo! Ukubona ukuthi lo mama wenziwa kanjani, bheka iposi Umnikazi wamakhandlela we-Halloween osesimweni somama.
Lokhu kungenye yezinto ezilula kakhulu ze-Halloween okufanele uzilungiselele nezingane. Okokuqala kuzodingeka badle ama-popsicles ambalwa futhi ngezinti ezisele bangalungisa lo mnandi cute monster izikebhe. Bazoba nokuqhuma impela!
Ezinye izinto zokwenza lo msebenzi wobuciko ukuhambisa amehlo, i-glue, isikele, umona, intambo emhlophe, omaka abanemibala. Uyabona ukuthi kwenziwa kanjani kokuthunyelwe Izintandokazi ezihle ze-lolly ze-Halloween.
I-classic engaphuthelwa kunoma yiliphi iphathi le-Halloween izikhwama ze- popcorn enetimu. Lona ngesimo samathambo. Kulula kakhulu ukuzilungiselela, ngoba lokhu uzodinga ama-popcorn ambalwa, iphepha elisobala, uthayi wokubopha iphakethe nomaka omnyama ukupenda ugebhezi.
Kodwa-ke, uma ufuna ukubona ukuthi kwenziwa kanjani igxathu negxathu ngikweluleka ukuthi ufunde okuthunyelwe Popcorn for Halloween. Uzobalungiselela ku-jiffy!
I-bat enhle yamakhadibhodi
Uma unemiqulu eminingana yamakhadibhodi ekhaya futhi ufuna ukusizakala ngayo ngokwenza ubuciko obuthile, lokhu kuhle ikhadibhodi bat Kungumqondo omuhle ukuhlobisa amakamelo endlu. Sebenzisa iphepha lokwakha elimnyama, elimhlophe, eliphuzi, isikele, i-glue, umaka, ne-powder blush encane. Umphumela uzoba muhle!
Uma ufuna ukubona ukuthi yenziwa kanjani, chofoza kokuthunyelwe I-bat funny yokwenza nge-Halloween nezingane.
El ikati elimnyama Kuyisilwane esikhonjwa ngokwesiko ne-Halloween futhi sinikeza umdlalo omningi ukuhlobisa iphathi yalolu hlobo. Uma uzithanda lezi zilwane, lokhu kungubuciko ongaba nesikhathi esihle ukukwenza. Akunzima kakhulu ukukwenza kepha kudinga ukunakekelwa emininingwaneni ukuze ibukeke iphelele.
Ukuyidala uzodinga izinto zokwakha ezimbalwa (amakhadibhodi anemibala, amapeni amnyama, ikhampasi, ama-cleaner amapayipi amhlophe amabili, isikele, ipensela, umaka omnyama, njll.) Kepha kungenye yezandla ze-Halloween ozoba nesikhathi esihle ngazo. Ngaphezu kwalokho, ungayilengisa noma kuphi endlini ukuyenza ibukeke kahle nasemnyango. Uma ungathanda ukubona zonke ezinye izinto kanye nevidiyo ebonisa ukuthi leli kati lenziwa kanjani igxathu negxathu, bheka iposi Ikati le-halloween.
Isigqoko esincane se-Halloween
Nge-Halloween awukwazi ukuphuthelwa isigqoko sobuthakathi! Ungakwenza ekhaya ngezinto ozigcinile kusuka kwezinye izikhathi futhi izingane zizokuthanda ukubamba iqhaza kunqubo yokukhiqiza ngoba lo msebenzi wobuciko ulula ukukwenza.
Ukuze wenze lokhu isigqoko somthakathi Ngobuso bexoxo uzodinga izinto ezimbalwa kuphela: amakhadibhodi amnyama, igwebu ngemibala ehlukahlukene, ipensela, isikele, ikhampasi nezinye izinto ezithile. Uma ufuna ukwazi konke okunye okusetshenzisiwe nemiyalo yokwenza lesi sigqoko sokuthakatha esihlekisayo, ungaphuthelwa okuthunyelwe Isigqoko esincane se-Halloween. Kuzoba ngomunye wemisebenzi yezandla yase-Halloween izingane ezizoyithanda kakhulu!
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Imisebenzi yezandla yezingane » 15 Crafts Halloween ukuba nesikhathi esihle